व्यंग्यात्मक उद्धरण डा हाउस
डा घर - केही मानिसहरू चिकित्सा गुप्तचर, मुख्य पात्र पछि नाम सुनेका छैनन्। करिश्मा Hyu लोरी शानदार डाक्टर को प्रकृति र व्यवहार को सबै सुविधाहरू प्रकट गर्छ। ग्रेगरी घर - सबैभन्दा प्रतिष्ठित अमेरिकी अस्पताल मध्ये diagnostician। उहाँले रोचक अवस्थामा, पेशेवर संस्थाहरू बाँकी ह्यान्डल गर्न सक्छन् जो मात्र काम लाग्छ। आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्गत, यो अनुभवी र उच्च योग्य डाक्टर को एक पुरा टोली काम गर्दछ। शो को विचार रूपमा शानदार रूपमा श्रृंखला "हाउस एमडी" बाट उद्धरण। तिनीहरूले यसरी areolas वरिपरि mystique सिर्जना गर्ने, सबै पक्ष बाट वर्ण प्रकट गर्छ।
को मनोवैज्ञानिक पोर्ट्रेट एक शानदार डाक्टर
डा हाउस पारंपरिक अर्थमा एक डाक्टर छैन भन्न सकिन्छ। उहाँले एक लाउने गाउन, स्थिर द्वन्द्व टाउको संग लगाउने किन छैन र रोगी र रोग व्यवहार गर्दैन क्लिनिक, को नियम पालन गर्दैन। रक्सी र शक्तिशाली narcotic पदार्थ गर्न लत असह्य दुखाइ आफ्नो लडाई थियो।
आफ्नो उपचार निरन्तर नैतिकता र नैतिकता व्यवस्था उल्लङ्घनको मा सीमाना छन्। अन्त पनि हालतमा मिलाउँछ - उहाँले कहिल्यै गलत भने, र। आफ्नो विशेष घोडा - डा हाउस उद्धरण। यो श्रृंखला बस मुख्य पात्र को रंगीन आंकडा लागि एक नजर लायक छ। उहाँले, Sherlock होम्स जस्तै पातलो र नाजुक घटनाहरूको causal श्रृंखला पर्दाफास कि तार्किक चेन धेरै बनाउँछन्।
छोटकरीमा वर्णन psycho डा हाउस, तिमी उसलाई निम्न विशेषताहरु दिन सक्छ:
misanthrope - एक व्यक्ति खोज्ने मानव समाज बचा गर्न;
विद्रोही - लगातार नियम र कानून resists;
Polyglot - उहाँले हिन्दी ज्ञान देखाउनुहुन्छ, विभिन्न भाषाहरू थाह स्पेनिश र चिनियाँ;
संगीत प्रशंसक - बस प्रतिभा को काम सुनेर छैन, तर उहाँले गिटार र पियानो खेल्छ;
cynic - व्यंग्य डा हाउस कुनै सीमा थाह: उहाँले निरन्तर यस्तो प्रेम, दया, वफादारी र विश्वास मानव भावना devalues।
यो protagonist सबै मानवता बिना छैन। डा हाउस, उद्धरण (व्यंग्य तिनीहरूलाई मा प्रबल) पंथ भएका छन् जो, अझै पनि दर्शक को लागि एक रहस्य रहनेछ।
पहेली डा हाउस
प्रशंसकको लोकप्रिय श्रृंखला को संख्या पछिल्लो सिजन लामो थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, हरेक दिन बढ्दै छ। के चिकित्सा गुप्तचर प्रेमीहरूलाई आकर्षित? सायद असामान्य पहेली? वा अप्रत्याशित प्लट? यी पार्टीहरू श्रृंखला, मुख्य कुरा दर्शकको ध्यान खिच्नुहुन्छ को मुख्य विशेषताहरु हो, त्यसैले यसलाई व्यंग्य र Jokes तीव्रता हो हुनत, प्रत्येक अवसरमा जारी छन्।
यो घर भन्न सुरक्षित छ - आज टेलिभिजनमा सबैभन्दा असाधारण र जटिल वर्ण को एक। यो लुकेको छ कि सबै गुणहरू जोडती, र सोही समयमा यो एक "सुपर हिरो" बनाउन:
शानदार वर्ण को मूर्तिलाई वृद्धि दिनुभएको मुद्दाहरू एक धेरै, पुस्तकमा संग व्यवहार गर्नुभयो "डा घर को रहस्य -। व्यक्ति र शो" यसको पृष्ठहरूमा, लेखक को पागल डाक्टर, के मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु यो दिन सक्छ यस्तो व्यवहार को कारण के छ बुझ्न खोज्छ, र श्रृंखला समान नैदानिक तस्वीर फरक छ।
यो पनि यसको दर्शन प्रतिबिम्बित छलफल उद्धरण डा हाउस।
दर्शन डा हाउस
को श्रृंखला "हाउस एमडी", र जो देखि कोटेशन गर्न प्रत्येक अन्य केही छैन सबै दुनिया भर लोकप्रियता प्राप्त गरेको वाक्यांश धेरै दर्शकहरु। वर्गीकरण यो motley भीड कठिनाई संग प्राप्त छ।
डा हाउस को दर्शन संसारको आफ्नो दृश्य को सार झल्काउने उद्धरण को एक किसिम छ। उदाहरणका लागि, उहाँले गर्ने दिमाग पायो जमीन, मा crawling सबै मानिसहरू जनावर भनिएको छ। तपाईं मेहनत भने, त्यसपछि तिनीहरूले संभव आदिम जगतले माथि उठन बनाउन। घर बुद्धिको बारेमा सोच्छ।
जीवन एक शानदार डाक्टर छ - यो जीवन को एक दर्शन, ज्ञान लागि तिर्सना निरन्तर छ, र उद्धरण डा हाउस आफ्नो व्यक्तित्व बुझ्न गर्न प्रमुख छन्।
एक शानदार डाक्टर, सुकरात, जस्तै हरेक दिन सत्यको खोजीमा छ। "- मानिसहरूलाई placebo (opium) धर्म।": उहाँले विश्वास केही, अज्ञानता को apogee रूपमा धर्म denouncing लिन्छ वस्तुतः आफ्नो व्यावसायिक जीवन फेला जो हरेक विश्वासीले, हाउस पनि cynical छ, र विशेष व्यंग्य संग।
डा हाउस: जीवनको बारेमा उद्धरण
घर, मान्छे कुरा, आफ्नो कैफियत मा विडंबना को उच्चतम डिग्री प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, उहाँले व्हाइट हाउस त किनभने यसको पर्खालको रंग को नाम किनभने अझै पनि यो स्थिति प्राप्त गर्दैन भन्ने गाढा चमड़ी सीनेटर गर्न sarcastically अंक।
व्यंग्य संग उहाँले आफ्नो जीवन लागू हुन्छ। हामी मानव अस्तित्व अर्थहीन छ भनेर भन्न, यो अझै पनि आफ्नो हरेक कार्य उचित निष्कर्ष छ हावी छ। ईवा को श्रृंखला को heroines को एक एक नक्कली मा "समय सबै परिवर्तन," केही गरेको छ भने, सबै कुरा एउटै रहन्छ कि घर भन्छन्। आफ्नो जीवन मात्र व्यावहारिक, तर पनि efficiencies को कार्यान्वयन विषय हो।
प्रेम बारे उद्धरण
घर, प्रेम अनुसार - यो मस्तिष्क रसायन को प्रभाव बस प्रतिक्रिया छ। , लत, यो एक दबाइ जस्तै हो "परम आनन्द inducing।" तर, लगभग श्रृंखला भर, उहाँले एक्लो छ।
साथै, हाउस निरन्तर छ प्रेम बारेमा बयान बारे quips: "त्यहाँ एक हावा अझै पनि थप महत्त्वपूर्ण छ त प्रेम हावा रूपमा आवश्यक छ भन्दै छ।"।
भावना को आफ्नो दृश्य र उद्धरण सम्झना मानव सम्बन्ध को महत्व बारे: "जे आफ्नो जीवनमा हुन्छ, के तपाईं एक व्यक्ति मार्फत, अन्ततः तपाईं एक कम्प्युटर र खान केही पछि बस्नेछ आउनेछ ..."।
डा हाउस उद्धरण प्रेम बारे - यो बरु यसलाई पासोमा परे छ जो मानिसहरू को निन्दा भन्दा सचेत को विफलता को एक पहिचान हो।
झूट बारेमा उद्धरण
"हरेक निहित" - पनि यदि यो पहिलो पटक आवाज छैन, यो उद्धरण उल्लेख छैन। यो सबैको जीवनमा झूठ आवश्यकता को व्याख्याहरु को एक विशाल संख्या उत्पादन गर्छ। त्यहाँ सबैले यो गलत छ भनेर थाह भने, झूट झूट हुनेछ? यो प्रश्न एक शानदार डाक्टर निरन्तर उठ्छ छ।
आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्न, उहाँले केहि बारेमा झूठ गर्न इच्छुक छ। तर, रोगी मात्र सत्य आवश्यक छ। बच्चा को निको भएपछि उहाँले आफ्ना आमाबाबुले झूठ छैन, यद्यपि भनिन्छ, र त्यो सही ठान्नुहुन्छ भन्ने थपियो।
कि डा हाउस छ। यसको निष्कर्ष आधार - झूट बारेमा उद्धरण।
पखेटा भए - कुनै एक डा हाउस गरेको वाक्यांश "सबैलाई निहित" र "मुर्ख रोगी" भनेर अस्वीकार गर्नु हुनेछ। तिनीहरूले एक मान्यता प्रतिभा र उहाँको व्यवहार मा प्रत्येक नयाँ मामला द्वारा समर्थित एकै समयमा सबै cynicism व्यक्त। सबै भन्दा राम्रो उद्धरण डा घर - यो मानव सिद्धान्तहरू र नैतिक मूल्यमान्यता को insignificance आफ्नो बयान थियो। कसैले यसलाई सिद्धान्त मा, यो मनोवृत्ति बुझ्न चाहनुहुन्छ जो एक रक्षा संयन्त्र, छ सोच्छ।
तर, घर सधैं आफ्नो खल्ती मा एक ट्रम्प कार्ड छ। तसर्थ, उहाँले ठीकै सही हरेक तरिकामा महसुस। उहाँले, "म सही छु? भन्छन् वा ... म सही छु? "। अर्को अपरिहार्य प्रतिभा सबै मूर्ख छ कि बारम्बार चिन्ता छैन। प्रायजसो उहाँले आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्न एक निश्चित दबाइ लिन विरामीहरु सम्भ्काउनु गर्न प्रयास गर्दा हुन्छ। मानिसहरू देखि अव्यावहारिक र आधारहीन सुझावहरू बनाउन सक्छ किनभने तर कहिले काँही त्यो गर्छ।
डा हाउस द्वारा पाठ cynicism
शो हेरेका जो कोहीले, घर cynically अक्सर छ कि छोराछोरी, प्रेम, धर्म र नैतिक सिद्धान्तहरू बारे बताइएको सम्झन सक्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण, वजन छैन किन हुनत हेर्न सक्ने एक रोगी छ, र 10 माइल एक दिन चल्छ। अल्ट्रासाउंड पछि शानदार डाक्टर त्यो एक परजीवी छ उनको बताउँछ। "यो तिमी हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्?" - रोगी सोध्छन्। "कानून - एक जोडी अमेरिका बाहेक," - जवाफ cynical डाक्टर सुनिन्छ।
(पत्नी बारे) "ठीक छ, यो लागि र माइक्रोवेव सेट" - उहाँले घर, कुनै पत्नी, छोराछोरी र मानव आनन्द को अन्य घटक जस्तै व्यंग्य डा आशा नाघ्यो किन भन्नुभयो गर्ने5मिनेट भाषण संगीतकार पछि।
श्रेणीमा Cynicism उच्चतम स्तर मा बनाए छ। घर जनहरूलाई व्यवहार गर्न त आवश्यक छ, अन्यथा यो चाँडै उपहार कमजोर हुनेछ र सही आफ्नो विरामीहरु को गम्भीर रोगहरु को कारण बारे अन्दाज लगाउनु किनभने। उहाँले मानिसको फोहोर रहस्य को हृदय प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो निकै निदान मा मद्दत गर्छ।
मर्न - वा कि त, बाँच्न मदत। सबै एकैचोटि। यो सिद्धान्त उहाँले आफ्नो खुट्टा मा गंभीर दुखाइ को धेरै वर्ष को लागि थियो र नैतिकता संग बोझ भएका ती सँग कुराकानी कसरी cynical देखाउँछ डाक्टर विशेष गरी छ।
यस श्रृंखला को प्रशंसक
डा हाउस को प्रशंसक शो 8 मौसम मा समाप्त अलिकति निराश थिए। तर, तस्वीर को निर्माताहरू तिनीहरूले परियोजना समाप्त थियो किन बताउनुभयो। घर कहिल्यै पार्टी पछिल्लो छोड्छ। "यो वातावरण अझै रहस्य, राखिएको छ जब, छोड्न राम्रो छ" - तिनीहरूले भने।
शो समाप्त गर्न निर्णय पीडादायी भए तापनि पनि अन्त्य चिकित्सा गुप्तचर को बेहद खुसी प्रशंसक छ। धेरै को राय मा, "घर टोली" प्रकाश धेरै भावनात्मक कथा र सबै भन्दा सशक्त वर्ण, टेलिभिजनमा देख्न सक्छ जो दिनुभयो।
यसलाई आफ्नो दर्शक को श्रृंखला को परिचय 81 लाख दर्शकहरूलाई पार देखि बस4वर्ष मा कि उल्लेख लायक छ, र डा हाउस अत्यधिक बौद्धिक aphorisms को रूप मा दुनिया भर गए उद्धरण। शो यसको आधार मा कम्प्युटर खेल सिर्जना गर्न विकासकर्ताहरूले को एक समूह प्रेरित।
रचनात्मकता र जीवनी LVA Borisova
आश्चर्यजनक चलचित्र ठगी र चोर बारे
"प्रकृति बाट उपहार": अभिनेता र भूमिकाको फोटो
"खेल लटरी-82": अभिनेता र भूमिकाको। अर्को iskromentnaya कमेडी Gaidai
जीवनी। सेल्मा Ergeç - प्रतिभाशाली टर्की अभिनेत्री र मोडेल
स्मार्टफोन एसस Zenfone2ZE551ML: मालिकको समीक्षा
सल्फर साबुन "Neva कस्मेटिक्स": समीक्षा र मूल्यांकन
थाई स्टेक सलाद: खाना पकाउने विकल्पहरू
हंगेरी च्याम्पियन Zoltan गेरा
ओवन मा quails कसरी खाना पकाउनु। धमकी दिन - ओवन मा खाना पकाउने
कसरी "टन" गर्न "टन" र अन्य मोबाइल अपरेटरहरु गर्न माग्नेले पठाउन?